Baarlamaanka Soomaaliya oo mar labaad guddoomiye u doortay Jawaari - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka Soomaaliya oo mar labaad guddoomiye u doortay Jawaari
January 11, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Baarlamaanka Soomaaliya oo mar labaad guddoomiye u doortay Jawaari. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah dib ugu doortay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cumaan sidoo kale looyaqaan (Jawaari).
Jawaari ayaa helay 141 cod, halka ninkii la loolamayay Cabdirashiid Maxamed Xidig uu helay 97 cod, sida ay sheegeen guddiga doorashada.
Kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada, Jawaari ayaa u mahadceshay kuwii doortay iyo kuwa aan dooranba.
Jawaari ayaa soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka afartii sanno ee lasoo dhaafay.
Guddoomiyaha cusub ayaa xafiiska joogi doona afarta sanno ee soo socda, sida uu qorayo dastuurka Soomaaliya.
Dhanka kale, doorashada guddoomiye ku-xigeenada ayaa la qaban doona 12-ka Janaayo oo ku beegan beri oo Khamiis ah, sida qorshuhu yahay, in ka badan 12 musharax ayaa u tartamaya guddoomiye ku xigeenada.